Isingeniso esifushane se-membrane bioreactor-Industry news-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Ukwethulwa okufushane kwe-membrane bioreactor
Isikhathi: 2020-04-14 Hits: 63
Eminyakeni yamuva, ngokukhula okusheshayo kokuphuma kwamanzi amdaka, ama-bioreactor we-membrane akhuliswe ngokushesha ngenxa yezinzuzo zawo zekhwalithi ephezulu yokugcwala, indawo encane yomhlaba, nokulawulwa okulula. Lo mbhalo ubukeza izinhlobo, umlando wokucwaninga, izinhlelo zokusebenza, usizo kanye nokubi kwama-membrane bioreactors, futhi wethula izinkinga ezinkulu kakhulu ze-membrane bioreactors, okungukuthi ukuxoxa ngezitho ezilandelanayo nolwelwesi lwefmling fouling Nikeza inkomba yesicelo socwaningo.
I-Membrane bioreactor (MBR) uhlobo olusha lohlelo lokuphathwa kwamanzi amdaka oluhlanganisa ubuchwepheshe bokuhlukaniswa kwe-membrane kanye ne-biological biology solution yokwelashwa ngamanzi. Izakhi zalo eziphambili zifaka i-bioreactor, imodyuli ye-membrane kanye nesistimu yokulawula. Phakathi kwazo, ukungcoliswa kokungcola ku-bioreactor ikakhulukazi kunikeza indawo inqubo yokucekelwa phansi. Imodyuli ye-membrane yakhiwa ulwelwesi nengxenye yalo esekelayo, okuyingxenye esemqoka yokusabela konke.
Ngenxa yamamojula ahlukene we-membrane kanye nenhlanganisela ehlukile yamamojula we-membrane nama-bioreactors, i-MBR ingaba nezindlela ezahlukahlukene zokuhlukanisa:
1. Ngokuya ngosayizi we-pore we-membrane module membrane ku-bioreactor, i-MBR reactionor ingahlukaniswa nge-microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, pervaporation nezinye i-reactors.
2. Ngokusho ukuthi i-aeration iyadingeka yini inqubo yokusabela ye-bioreactor, ingahlukaniswa nge-aerobic membrane bioreactor ne-anaerobic membrane bioreactor. Phakathi kwazo, uhlobo lwe-aerobic ikakhulukazi lusetshenziselwa ukwelapha amanzi amdaka asemadolobheni kanye nokukhuculwa kwendle okufuywayo, futhi uhlobo lwe-anaerobic lusetshenziselwa kakhulu ukuphatha amanzi amdaka avela endaweni ephakeme.
3. Ngokwendlela nendlela yokulungiswa kwesakhiwo se-membrane kule module ye-membrane, i-MBR ingahlukaniswa ibe yipuleti nohlobo lohlaka, uhlobo lwesilonda somoya oyindilinga, uhlobo lwe-tube tube, uhlobo lwe-capillary kanye ne-hole hole membrane module. Phakathi kwazo, ezijwayelekile kukhona ipuleti nohlobo lozimele nohlobo oluyisiyingi se-fiber.
4. Ngokwomphumela we-module ye-membrane, ingahlukaniswa nge-MBR yokuhlukanisa, i-aeration MBR ne-MBR yokukhipha. Uhlobo lokuhlukanisa lusetshenziselwa ikakhulukazi ukususa izinhlayiya ezimisiwe ekusetshenzisweni kwendle nokugcwalisa kahle ukwahlukanisa okuqinile kwe-liquid. I-Aeration isetshenziswa ikakhulukazi ekwelapheni imfucumfucu ephezulu yemfucuza. Uhlobo lokukhipha isetshenziswa ikakhulu ekwelapheni kwamanzi amdaka kwezimboni ukuqeda ukukhishwa nokuqoqwa kokungcola emanzini amdaka.
5. Ngokusho kokubekwa okuhlukile kwamamojula we-membrane nama-bioreactors, i-MBR ingahlukaniswa ngama-bioreactors e-membrane ahlukene futhi ahlanganisiwe. I-bi -actoror ye-membrane ye-membrane ebanzi futhi ibizwa ngokuthi yi-bioreactor ejikelezayo. Uketshezi oluxubile lungena ngaphakathi kwemodyuli ngokucindezela. Ngaphansi kwesenzo sengcindezelo, uketshezi lungena kulolubumba bese izinhlayiya eziqinile zibanjiswa. Ngohlobo oluhlanganisiwe, imodyuli ye-membrane ibekwa ngqo ngaphakathi kwe-reactor.
Okwedlule: Inqubo yocwaningo nokusetshenziswa kwe-MBR
Okulandelayo: Inkambo yokuthuthuka kanye nomkhuba wesikhathi esizayo we-membrane technology ekusetshenzisweni kabusha kwemithombo yamanzi